teleskopika hydraulic jack - EPONT
teleskopika hydraulic jack
Eo amin'ny toerana mety ianao teleskopika hydraulic jack.Amin'izao fotoana izao dia efa fantatrao fa, na inona na inona tadiavinao, dia azonao antoka fa hahita izany ianao EPONT.manome toky izahay fa eto io EPONT.
Ny EPONT dia mijoro amin'ny fitsapana rehetra ilaina amin'ny oekeko-tex. Tsy misy simika simika misy poizina, tsy misy formaldehyde, VOCS ambany, ary tsy misy ozonina..
Izahay dia mikendry ny hanome ny kalitao avo indrindra teleskopika hydraulic jack.ho an'ny mpanjifa maharitra ary hiara-hiasa amin'ny mpanjifanay izahay hanolotra vahaolana mahomby sy tombony amin'ny vidiny.
Mpanamboatra gorodona matihanina
Yipengjack dia raisina ho iray amin'ireo mpamatsy Porta Wead Jack, izahay dia mamokatra porta isan-karazany amin'ny Porta West Jack Extrasent vokatra tsara miaraka amin'ny fahombiazana lehibe indrindra ary marina. Ny vokatra azontsika dia mifanaraka amin'ny fepetra isan-karazany amin'ny indostrian'ny indostria, dia nanavao ny fitaovana famokarana sy ny fahaizan'ny mpitantana, ny injeniera ary ny teknikan'ny teknisianina sy ny teknikan'ny teknolojia. Mendri-pankasitrahana ny toetra sy ny endri-javatra maharitra sy ny halavan'ny porta Ny vokatra isan-karazany dia mifanaraka tsara amin'ny mpanjifany satria ny herinaratra Porta izay nomen'ny US dia nomena ny fahafaham-po ny fepetra takian'ny mpanjifa.